पोखरामा भेटिए नयाँ र्यापर ! हेर्नुहोस यस्तो छ उनको प्रतिभा - Enepalese.com
पोखरामा भेटिए नयाँ र्यापर ! हेर्नुहोस यस्तो छ उनको प्रतिभा
इनेप्लिज २०७६ असार ११ गते १:३४ मा प्रकाशित
पोखराका सुजन गिरि भर्खर ११ कक्षा पढ्दैछन् । उनलाई सानै देखि र्याप गित मन पथ्र्यो अहिले उनी आफुलाई र्यापर बनेर चिनाउन चाहान्छन् ।
उनले एउटा गित पनि निकालेका छन् । र्याप गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भन्छन्, सुजन । उनलाई घरमा बा आमाले र्याप गित गाएको खखासै मन पराउनुहदो रहेनछ । तर पनि आफु र्यापर बन्ने दौडमा छन् । उनि आज उनले आफ्नो क्षमता आफ्नो प्रतिभा सबै दर्शक महानुभावलाई देखाउन चाहेका छन् ।
हामी मार्फत यहाँहरुलाइृ सुजन गिरीको यो प्रतिभा यो कुराकानी कस्तो लाग्छ अन्त्य सम्म हेर्नुहोला अनि सल्लाह सुझाव दिन नविर्सनुहोला ।